March 4, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 4th, 2017'
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Maanta Kulan la Qaatay Guddiga Gurmadka Abaaraha (SAWIRRO)
March 04, 2017 – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay Guddiga Gurmadka Abaaraha, waxana ay si gaar ah uga wada hadleen wax u qabashada dadka Soomaaliyeed ee saameynta ballaaran ay ku yeesheen Abaaruhu. Kulankan oo ay guddida gurmadka abaaraha ugu warbixiyeen Ra’iisul Wasaaraha waxa ay soo bandhigeen …
Abaaraha ka Jira Gobolka Nugaal (VIDEO)
Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay abaarata ka jirta dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland iyo sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka abaarta ku habsetay. Mudane Cabdixakiin Camey ayaa u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in ay jiraan xoolo dhaqato Soomaaliyeed oo ku soo hayaamay qaarkamida Gobolada Puntland kuwaas oo ka kala yimid Waqooyiga, Galbeedka, iyo Koonfurta …
Xiriika Hoose ee ka Dhaxeeyay Xukuumadda Donald Trump iyo Ruushka oo Maalinba Maalinta ka Danbeysa soo Ifbaxaya (VIDEO)
March 04, 2017 – Shalay ayay ahayd markii Wasiirka Caddaaladda ee dalka Maraykanka Gen. Jeff Sessions uu iska casiley hoggaaminta baaritaanka xiriirkii u dhaxeeyay ololihii doorashada ee Donalad Trump iyo sirdoonka Ruushka oo la aaminsan yahay in Ruushku ay farogeliyeen doorashadii ka dhacday dalka Maraykanka. Jeff Sessions ayaa kulan la qatey Safiirka Ruushka u fasdhiya …
Xiriirka Ruushka iyo Xukuumada Trump (VIDEO)
Jeff Sessions ayaa kulan la qatey Safiirka Ruushka u fasdhiya dalka Maraykanka, Ambsador Sergej Kisljak mudadii ay socotey ololahii doorashada ee sanadkii 2016, taas oo uu ka qariyey Xildhibaanada Aqalka Senate-ka ee ansixinayey, kadib markii si toos ah loo weydiiyey in uu wax kulan ah la yeeshey cid ka socota Ruushka. Baaritaanka ay waddo hay’adda …
Suuqa Ganacsiga Soomalida ee Xaafada Islii oo Maalintii Sadexaad Xiran
March 04, 2017 – Suuqa Ganacsiga xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta xiran maalintii sadexaad, kadib markii ay iskhilaafeen Ganacsatada yar yar iyo kuwa waa weyn halkaasi ku ganacsada. Guddiga Ganacsatada Xaafada Islii ayaa sheegay in uu xiran yahay Suuqa inta laga xalinaayo Khilaafka jira iyo cabashada ay mujinayaan Ganacsatada yar …